Short.io: Mpanafoana URL misy marika fotsy | Martech Zone
Short.io: Mpanafoana URL misy marika fotsy
Alakamisy, May 7, 2020 Wednesday, May 6, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny fotoana kelikely dia nanao sonia serivisy aho hanafohezana ny URL-ko, saingy lafo be ny vidin'ny rafitra. Ny fampiasana ny zanadiko manokana dia lafo be kokoa amin'ny maodelim-bidiny. Raha ny marina dia nandoa bebe kokoa ny kaonty URL hanafohezan'izy ireo aho noho ny nanenjehana ahy tamin'ny sehatra marketing iray manontolo.
Azoko natao ny nampiasa kinova maimaimpoana izay tsy namboarina manokana ny sehatra misy ahy, fa II kosa te-hitoky sy hahafantatra ny URL izay nozaraiko ny olona II… amin'ity tranga ity go.martech.zone. Ny famoahana URL mahazatra dia saina mena ho an'ny olona mahatsiaro tena amin'ny filaminana.
Minitra vitsy monja dia nahita fitaovana am-polony an-tserasera, ary Short.io niavaka avy hatrany. Azoko faritana fotsy miaraka amin'ny zanadiko manokana ilay fohy, na dia eo ambanin'ny kaonty maimaimpoana aza! Tsy izany ihany fa, tena manana fitaovana fivezivezena amin'ny fohy kokoa izy ireo raha tsy afaka manondrana sy manafatra ny angon-drakitrao… ary tsy andoavam-bola izany.
Miaraka amin'ny Short.io, azonao atao ny mamokatra azy io amin'ny fomba mavitrika na azonao atao ny mampiasa azy isa sy fitomboan'ny fiara ho anao. Ary, azonao atao ny miditra ary manamboatra ny slug araka izay tianao raha tianao koa.
Seho iray lehibe ihany koa ny fanaraha-maso ny Fampielezan-kevitra amin'ny Google Analytics. Fomba tsara hampiasana mpandika URL dia ny fampihenana ny halavan'ny URL lava iray izay nampidirinao koa ny tadin'ny fangatahanao UTM. Miaraka amin'ny Short.io, ity dia ampahany amin'ny safidy amin'ny URL nohafohezinao miaraka amina interface madio madio.
Farany, Short.io koa dia manolotra a WordPress Plugin hanafohezana ho azy ny rohy ampiasainao amin'ny API azy ireo. Endri-javatra tena mahafinaritra!
Tags: bitlycustom domainGoogle Analyticsurl fanarahana fanentanana google analyticsurl fanaraha-maso google analyticsfohy.cmfohy.iofohy kokoampanafoana urlUTMfotsy marika
Fironana teknolojia 6 amin'ny taona 2020 Tokony ho fantatry ny mpanoritra rehetra